Machechi Oyambirana Kusashandiswa Munyaya dzeMatongerwo eNyika
Chikunguru 12, 2013
MUTARE — Sangano remachechi emudunhu reManicaland, Churches in Manicaland, rinoti harisi kufara nezviri kuitwa nevakuru vezvematongerwo enyika vari kushandisa makereke kuti vawane rutsigiro musarudzo.
Vanoona nzvekuburitswa kwemashoko musangano iri, Reverand Llyod Nyarota, vanoti zvinosuwisa kuona vakuru vemapato ezvematongerwo enyika vachiita zvisina kutsarukana.
Vachitaura nevatori venhau vedunhu reManicaland, Reverend Nyarota vanoti kunze kwekusuwiswa nemaitiro evatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika, vanoti havasi kufara zvakare nekushandiswa kwemhirizhonga senzira yekutyisidzira vanhu kuti vatsigire vezvematongerwo enyika.
VaNyarota vanoti kusiyana kwevanhu mukufunga kwavo uye nezvavanofarira hazvifaniri kupatsanura vanhu munyika kusvika pakurwisana, kubhinyana, kukakavadzana uye kuurayana.
VaNyarota vanoti semachechi, raramo yevanhu vose inobva kuna mwari. Vanotiwo mapato ezvematongerwo enyika anongopa chete mukana wekuti pave nehwaro hwekuti nyika iri kunanga kupi.
VaNyarota vanoti kurwisana kwakaitika mugore ra 2008 hakufanirwi kudzokororwa zvakare rwendo runo musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru.
VaNyarota vanoti vemachechi vari kurwadzikana zvikuru nekuomerwa nehupenyu kuri kuita veruzhinji muZimbabwe, kunyange hazvo hupfumi huri munyika.
Mashoko evemachechi anobuda apo mutungamiri weZanu PF, uye vari mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vari kuita musangano neMugovera paMafararikwa Shrine kuchechi ye-mapositori ekwa Johanne Marange.
Ukuwo mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri weMDC huru, VaMorgan Tsvangirai, vari kuitawo musangano wekutsvaga rutsigiro muSakubva Stadium neMugovera kubva nenguva dza10 mangwanani kusvika 4 zuva rovira.
Vemachechi vange vari pachiitiko chanhasi vanosanganisira Catholic Commission for Justice and Peace, Zimbabwe Council of Churches, pamwe neEvangelical Fellowship of Zimbabwe.